UKUZINZA KWAKHIWE NGAMATYE - KULUNGELE IZIBINI EZITHANDANAYO - I-Airbnb
UKUZINZA KWAKHIWE NGAMATYE - KULUNGELE IZIBINI EZITHANDANAYO
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDean And Trish
UDean And Trish yi-Superhost
Indawo yokuhlala enomtsalane enendawo yokuphumla enendawo yokutyela esemgangathweni kunye nekhitshi, igumbi leshawa elinendlu yangasese. Igumbi lokulala elisemgangathweni, elinebhedi elala abantu ababini, iigawuni ezifakelweyo neebhegi zedrowa, linebhalkhoni encinci ejongene neekhabhathi neendawo.
Indawo yokuhlala ikwindawo enabantu abambini abatshintshiweyo. Umgangatho waphantsi ugcwele ikhitshi nendawo yokuphumla epheleleyo, ukuya kwigumbi leshawa elongezelelekileyo. Izitepsi ziyonyuka zisiya kwigumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini nendawo yokugcina izinto ezininzi. Ibhalkhoni ijonge ngaphandle emasimini, ngokuqhelekileyo ihlala abamelwane bethu iinkomo ezinobisi.
4.89 · Izimvo eziyi-71
Isetingi yethu isemaphandleni. Izolile kwaye inokuthula. Singqongwe ziifama neefama ezisebenzayo. Singaphantsi kweemayile eziyi-2 ukusuka kwidolophu yaseBais, eneevenkile ezininzi, ibhari yeTabac enesidlo sasemini kunye neebhanki ezimbini ezinomatshini wemali.
Malunga nemizuzu eyi-20 ngapha nangapha ziidolophu ezinkulu zaseSillé le Guillaume, eVillaine la Juhel nase-Evron, kodwa eyona nto siyithandayo ngoMeyienne. Idolophu yase-Mayenne ineebhari ezininzi kunye neevenkile zokutyela, iimyuziyam ezimbini kunye necawa. Ungaphinda uthathe uhambo olunobubele ngakumlambo iMayenne kunye nenkqubo yawo yokutshixa amasango.
Unokujikeleza ngokhuseleko ngoMeyienne ngenxa yendlela eyayikhethekileyo yabantu abahamba ngesikhephe abahamba ngeekhilomitha eziyi-85 ukusuka emlanjeni u-Mayenne, iyiparadesi yabakhweli beentaba kunye nabakhweli beebhayisekile ngokufanayo, kwaye kunye neflethi yayo ilungele nje ukuhamba ngebhayisekile. Indlela eya kuMlambo i-Mayenne ikwayinxalenye ye-The Vélo Francette, umzila omtsha wokuqhuba ibhayisekile osuka kwiikhilomitha eziyi-630 ukusuka e-Normandy, ukuya kwi-Mayenne Valley ukuya kwi-Loire Valley, kunye ne-Marais Poitevin ukuze ugqibe e-La Rochelle. Ngaphakathi kwesebe likaMeyienne zikwanazo neekhilomitha eziyi-128 zeendlela zetreyini zangaphambili ezenza kubekho ukhetho olukhuselekileyo lokuzikhupha, nokuba uhamba ngeenyawo, uhamba ngebhayisekile okanye ukhwele ihashe. Izitrato zase-Mayenne azinabantu baninzi, nto leyo eyenza abakhweli beebhayisekile bakwazi ukuhamba bekhululekile emaphandleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Dean And Trish
Siphila kumabala afanayo, sinyuka nje induli. Ngoko siza kufumaneka ukuze siphendule nayiphi na imibuzo okanye sisombulule izinto ezikuxhalabisayo.
Ipolisi yethu ininzi gqitha into yokuba iholide yakho; sifuna ukuba uzonwabise kodwa zikhona xa kuyimfuneko, kodwa soze uphazamise.
Ipolisi yethu ininzi gqitha…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bais